सेल्फीमा ‘रमाउँदैै’ ज्ञानेन्द्र शाह ! - Jhilko
सेल्फीमा ‘रमाउँदैै’ ज्ञानेन्द्र शाह !
काठमाडौं । सीमित आसेपासेहरुको घेरामा कैद भई राजदरबारमा बसेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिबेला सेल्फी सुरमा छन् । जनताले आन्दोलनमार्फत दरबारबाट सत्ताच्युत गरी नागार्जुन दरबारतिर पठाइ दिएपछि उनी यतिबेला धर्मकर्मको बहानामा फेरि सक्रिय हुन थालेका छन् । पूजा अर्चनाका वहानामा विभिन्न मठ मन्दिर धाइरहेका ज्ञानेन्द्र शाह अहिले पूर्वी नेपालमा भीड जम्मा पारेर सेल्फी खिच्दै समय व्यतित गरिरहेका छन् ।
पूर्व राजाको ‘सेल्फी अभियान’ लाई पूर्व पञ्च तथा राप्रपाका नेता कमल थापाले जनता र राजाको सम्बन्ध बढेको अर्थमा व्याख्या गरेका छन् । सत्तामा सदैव रहिरहने थापालाई अहिले वाहिर बस्दा छटपट भएको हुनुपर्छ र पूर्व राजाको बुइ चढेर सत्तारोहण गर्ने भुत चढेको हुनपछ्र्र । पूर्व पञ्च नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले कमल थापा प्रवृत्तिलाई ‘मुसा प्रवृत्ति’ भनेर व्यंग्य गरेका थिए ।
पूर्व राजालाई जनता र राष्ट्रको पक्षमा क्याम्बोडियाका सिंहानुक जस्तै बन्न तत्कालीन विद्रोही माओवादीले प्रस्ताव गरेको थियो । उनले त्यसलाई टेरपुच्छरमात्र लगाएनन्, कमल थापा प्रवृत्तिको लहैलहैमा लागेर उनले संसदवादी दललाई समेत निषेध गरे । त्यसपछि दश वर्षे जनयुद्धको जगमा २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र विस्थापित भयो ।
तर, उनी हिन्दू धर्मका नाममा घुमाउरो शैलीमा जनताको आफूप्रतिको भावना बुझ्न इलामतिर पुगेका छन् । रमाइलोमा भुलेका ज्ञानेन्द्र शुक्रबार भने सेल्फीको मुडमा भेटिए । त्यस वाहेक पनि उनी पछिल्ला समयमा मान्छेसँग भेटघाटलाई तीब्र बनाइरहेका छन् ।
पूर्व पञ्च कमल थापा प्रवृत्तिको उक्साहटमा उनले फेरि सत्तारोहण गर्ने सपना देखेका हुन भने त्यो विडम्बना नै हुन्छ । कमल थापा प्रवृत्तिहरु पछारिएर नै माओवादी संसदवादी अगाडि आएका हुन । माओवादी र संसदवादी पराजीत गर्न कमल थापाहरु होइन त्यहीभित्रबाट वा अर्काे नयाँ शक्ति निर्माण भएर मात्र राजनीतिक प्रणालीमा धक्का लाग्न सक्छ । इतिहासको पनरावृत्ति हुँदैन भन्ने कुरा कमल थापा प्रवृत्तिले बुझ्नुपर्छ ।
पशुपति र प्रकाशचन्द्रको हल जोडी पनि बारामा
न्यू सिल्क रोडले चीनलाई सुपरपावर बनाउला र ?
राजनीतिक र व्यावसायिक रणनीतिकार ब्रुनो मकाएसका अनुसार यो सफल भए शताब्दी लामो भू...
प्रमको युरोप भ्रमणले सम्बन्धलाई दरो बनाउने विश्वास
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुने अन्तरराष्ट्रिय श्रम...
साकीरा र जेनिफरले दिए धमाकेदार प्रस्तुती
आफ्नो ४३ औं जन्मदिन मनाउदै गरेकी गायीका जेनिफरले सदावहार प्रस्तुतिले दर्शकको मन...
'मनाङेहरु' नेकपा प्रवेश गर्दा किन खुशी हुँदैनन् 'लेखनाथहरु'...
विशेषतः नेकपा भित्र जो, बैचारिक राजनीति गर्छन्, विचारका मुद्धाहरु निरन्तर पार्टीभित्र...